Abalingani bevenkile yokuhlamba impahla, Igumbi lokuhlamba ukujoyina, inkonzo yokuhlamba
Ikhasi> Isikhundla samanje> Ngubani okhonzayo> Ivenkile yokuhlamba
I-Guangzhou ENEJEAN yohlamba inkampani yokuvelisa inkampani yinkampani ekhethekileyo yokucoca i-dryer kwaye ijoyina ukuvelisa kunye nokuthengisa. Ukuhlanganiswa kwamashishini akwi-high-tech kubandakanya: Izixhobo zokucoca ngokukhawuleza, izixhobo zokucoca amanzi, iitishi zokuhlamba ihotele, izixhobo zokuhlamba iimpahla, ukuhlamba iimpahla zorhwebo umatshini kunye nokuphuhliswa kwezinto zokusebenza kunye nemveliso.
UMveliso unobungqina bokuqinisekiswa kwenkqubo yeBritish CAS ISO9000, uqinisekiso lokusingqongileyo kunye nesitifiketi se-CE kunye ne-national light lighting (ukugqoka, ukuhlamba) umatshini wokulawula umgangatho kunye novavanyo lokuhlola ukuhlola.
I-Enejean Ukuhlamba imveliso yamashishini ngumsebenzi wobugcisa kunye nophuhliso, njenge-machine-eluting, inkunkuma, umshini wokuhlamba umshishini, umatshini wokutshiza kunye nezinto zokusebenza zokuhlamba. malunga neenkcazo ezingama-60. It isetyenziswe kuqala kwiNgqungquthela yamandla amakhulu ehotele, Amagosa, iSibhedlele, iShishini kunye nokuhlamba iimpahla zokuhlamba. Kwiindidi ezahlukeneyo zokugaya iingubo, isiliki, iingubo, indlu yeendwendwe, indlu kawonkewonke, indlu yokulala, indlu yokuphumla njl. Umkhiqizo wethu uphuhliso olugqityileyo kwaye uvelise uhlobo oluthile lokuhlamba umatshini ongenawo umbane womoya kunye nokufudumeza kombane okutshisa ukutshisa ngomjikelezo ojikelezayo womoya. Ukunciphisa amafutha 50%, ukunciphisa impahla yokuhlamba i-30% elula yokusebenza, ukusebenza kwendlela yokufutshane, ukunyaniseka, ukukhuselwa kwendalo. Ziyimveliso ebalulekileyo yokuphromotha ukugcina nokunciphisa ilizwe lethu malunga nokugqitywa kweebilisi, kwaye kufaka indawo yokudala. Ikhampani yethu ibhekisela "kwixabiso elifanelekileyo, ixesha elifanelekileyo lokuvelisa kunye nentsebenzo enhle emva kokuthengisa" njengesiqalo sethu. Sithemba ukusebenzisana nabathengi abangaphezulu ngokuphuhlisa intsebenziswano kunye neenzuzo. Siyakwamkela abathengi abanokuqhagamshelana nathi sinciphise impahla yokuhlamba i-30% elula yokusebenza, ukusebenza kwendlela yokufutshane, ukunyaniseka, ukukhuselwa kwendalo. Ziyimveliso ebalulekileyo yokuphromotha ukugcina nokunciphisa ilizwe lethu malunga nokugqitywa kweebilisi, kwaye kufaka indawo yokudala. Ikhampani yethu ibhekisela "kwixabiso elifanelekileyo, ixesha elifanelekileyo lokuvelisa kunye nentsebenzo enhle emva kokuthengisa" njengesiqalo sethu. Sithemba ukusebenzisana nabathengi abangaphezulu ngokuphuhlisa intsebenziswano kunye neenzuzo. Siyakwamkela abathengi abanokuqhagamshelana nathi sinciphise impahla yokuhlamba i-30% elula yokusebenza, ukusebenza kwendlela yokufutshane, ukunyaniseka, ukukhuselwa kwendalo. Ziyimveliso ebalulekileyo yokuphromotha ukugcina nokunciphisa ilizwe lethu malunga nokugqitywa kweebilisi, kwaye kufaka indawo yokudala. Ikhampani yethu ibhekisela "kwixabiso elifanelekileyo, ixesha elifanelekileyo lokuvelisa kunye nentsebenzo enhle emva kokuthengisa" njengesiqalo sethu. Sithemba ukusebenzisana nabathengi abangaphezulu ngokuphuhlisa intsebenziswano kunye neenzuzo. Siyakwamkela abathengi abanokuqhagamshelana nathi kwaye kufaka indawo yendalo endala. Ikhampani yethu ibhekisela "kwixabiso elifanelekileyo, ixesha elifanelekileyo lokuvelisa kunye nentsebenzo enhle emva kokuthengisa" njengesiqalo sethu. Sithemba ukusebenzisana nabathengi abangaphezulu ngokuphuhlisa intsebenziswano kunye neenzuzo. Siyakwamkela abathengi abanokuqhagamshelana nathi kwaye kufaka indawo yendalo endala. Ikhampani yethu ibhekisela "kwixabiso elifanelekileyo, ixesha elifanelekileyo lokuvelisa kunye nentsebenzo enhle emva kokuthengisa" njengesiqalo sethu. Sithemba ukusebenzisana nabathengi abangaphezulu ngokuphuhlisa intsebenziswano kunye neenzuzo. Siyakwamkela abathengi abanokuqhagamshelana nathi
Sibonga ngokukhethekileyo kwiyunivesithi ye-zhongshan, i-guangzhou i-huangpu i-traffic police, i-zhongshan ye-ChenXingHai esibhedlele, isibhedlela sase-zhongshan iSuHuaZan esibhedlele, ama-95017 amabutho, ii-huizhou zokubeleka kunye namaziko okunakekela abantwana, iqela le-zhanjiang, i-zhaoqing i-OYC, i-Guangzhou FengXing square, i-huadu i-ORINO inkampani. Nemikhosi, izibhedlele, izikolo, amasebe karhulumente kunye nelizwe elingaphezu kwama-1200 ahlambulukileyo ahlambulukileyo, inkxaso kunye nentsebenziswano yokuthengisa isicathulo esitokisini, sebenzisa umatshini wokuhlamba oomatshini we-ENEJEAN nkampani.
I-China kunye nokudayiswa kwamalungu ebutho lombutho, lugqwesa ishishini-ukwaneliseka kwamashishini, ubungqina be-guangzhou, ishishini lokholo olulungileyo, iqumrhu le-guangzhou lokuzibophezela kwekhwalithi.
IMalaysia chauvinists ihotele yokuhlamba
I-Fujian jinyuan ihotele yokuhlamba